प्रधानमन्त्री नपाए प्रचण्डले पार्टी फुटाउने, यसरी भइरहेको छ तयारी ! (सनसनीपूर्ण खुलासा) – Khabar Silo
प्रधानमन्त्री नपाए प्रचण्डले पार्टी फुटाउने, यसरी भइरहेको छ तयारी ! (सनसनीपूर्ण खुलासा)
काठमाडौं– प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष प्रचण्डबीच पछिल्लो समय तिक्तापूर्ण सम्बन्ध रहेको चर्चा भइरहेको छ ।
पार्टी एकताका बेला गरेका सहमति कार्यान्वयन नगरेर धोक दिएको भन्दै प्रचण्ड ओलीसँग रुष्ट बनेका छन् । उनका सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा समेत ओली प्रतिका असन्तुष्टी झल्किने गरेका छन् ।
ओलीकै कारण पार्टीलाई अल्सर भएको भन्दै उनले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिने गरेका छन् । यस्तै माधवकुरमार नेपाल र बामदेव गौतम समेत ओलीसँग असन्तुष्ट छन् । प्रचण्ड, नेपाल र गौतम असन्तुष्ट बनेपछि नेकपामा नयाँ समिकरण बन्न लागेको चर्चा राजनीतिक वृतमा छ ।
पार्टी एकिकरणका बेला ओली र प्रचण्डबीच सरकारको नेतृत्व आधा–आधा कार्यकाल चलाउने सहमति बनेको कुरा छिपेको छैन । अहिले ओली आफुले नै पाँच बर्ष प्रधानमन्त्री चलाउने भन्दै हिडेका छन् । यो कुरा प्रचण्डलाई पचेको छैन । यही अवस्थामा प्रचण्डले प्रधानमन्त्री नपाए पार्टी फोर्न सक्ने खुलसा भएको छ ।
राजनीतिक विश्लेषक प्रा.डा सुरेन्द्र केसीले सहमति कार्यान्वयन नभए ओली प्रचण्ड सम्बन्ध धुमिल हुनसक्ने बताएका छन् । नेपालआजको कुराकानीमा उनले ओलीले प्रधानमन्त्री नछोड्ने र ओलीले नछोडे प्रचण्डको कदम धमकेदार हुने बताएका छन् । ‘ओलीले छाड्नुपरे मध्यावधिमा जान्छन् । प्रचण्डले प्रधानमन्त्री नपाए पार्टी फुटाउनेछन् ।’
केपी ओलीले बढाए उपेन्द्र यादवको तनाव, समाजवादीमा लफडा !
काठमाडौं – कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संविधान संशोधनको माग पूरा नगरेको भन्दै सरकारमा सहभागी समाजवादी पार्टीभित्र सरकारबाट बाहिरिने पक्षमा मत बढेपनि अहिले नै हट्नु नहुने तर्क राख्ने समूह पनि उत्तिकै प्रभावमा देखिएको छ । एक पक्ष ‘सरकारबाट हट्ने निर्णय लिनका लागि समाजवादी पार्टीले यही कात्तिक ३० र ३१ गतेका लागि केन्द्रीय समितिको […]
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले अरु गाडी भन्दा विद्युतीय निजी सवारी साधनको भन्सार महशुल अझै पनि ५० प्रतिशत कम रहेको बताएका छन्। संसदमा बजेटमाथि भएको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै डा. खतिवडाले पहिले कमजोर वर्गले उपयोग गर्न सक्नेदेखि सम्पन्न वर्गले उपयोग गर्ने सम्मको विद्युतिय सवारी साधन एउटै रेट भएकोले भन्सारका दरहरु परिमार्जन गरिएको बताए। हाल […]
बाह्य लगानी जुटाउने वातावरण सरकारले बनाउनुपर्छ : नेपाल
काठमाडौं : नेकपाका वरिष्ठ नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले बाह्य लगानी जुटाउनका लागि सरकारले उपर्युक्त वातावरण सृजना गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। समृद्ध नेपाल निर्माणमा एनआरएनहरुको भमिका विषयमा सञ्चार केन्द्र नेपालले शनिबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा उनले सडक होस् या सामुन्द्रिक बाटो, विकासका लागि मुख्य आधार हुने भएकाले सरकारले त्यसलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए। ‘नेपालमा घुम्नको लागि होस्, […]
मैदानमा खेलाडीलाई पानी खुवाउन प्रधानमन्त्री आफैं पुगेपछि…
प’क्राउ गर्ने डर भएपछि गायिका ज्योति मगरले सञ्चारमन्त्रीलाई पढाईन् यस्तो क्लास !